I-United Airlines ilindele ukuba ibuyele kwiNzuzo kwi-Q3 2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-United Airlines ilindele ukuba ibuyele kwiNzuzo kwi-Q3 2021
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Umphathi we-United Airlines uScott Kirby
I-United Airlines ilindele ukuqhubeka nokuzuza njengoko amashishini amaninzi ebuya ekupheleni kwehlobo nase-2022, kunye nokufumana kwakhona ngokupheleleyo kwimfuno ekulindeleke ngayo ngo-2023.
I-United Airlines ibhengeza iziphumo zekota yesibini zonyaka wama-2021.
I-United ibona ngokukhawuleza kunokuba kulindelwe ukubuyisa ingeniso.
Iiprojekthi zenqwelo moya ezihlengahlengisiweyo zerhafu yengeniso kwisiqingatha sesibini se2021.
Iindiza zeManyano (UAL) namhlanje kubhengezwe iziphumo zekota yesibini zonyaka wama-2021. Inkampani ngoku ilindele ukulungelelaniswa kwengeniso yangaphambi kwerhafu kwikota yesithathu neyesine ye-2021 njengemfuno yokuhamba ibuye.
Ukusebenza kwekota yesibini yenkampani ubukhulu becala kugqithe kulindelo lwantlandlolo njengoko uhambo lwamazwe aphesheya kunye nokuhamba kweshishini kukhawuleze ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe, kunye nokuphuculwa kwesivuno. Ukujonga phambili, inkampani ilindele ukuqhubeka kokufumana njengoko amashishini amaninzi ebuya ekupheleni kwehlobo nase-2022, ngokufumana kwakhona ngokupheleleyo kwimfuno ekulindeleke yi-2023.
"Ngenxa yobungcali nokunyamezela kwabasebenzi baseMelika abasebenze nzima ukukhathalela abathengi bethu ngobhubhane, inqwelo moya yethu ifikelele kwinqanaba lokutshintsha: silindele ukubuya senze inzuzo kwakhona," utshilo United Airlines U-CEO uScott Kirby. "Njengokuba siphuma kweyona ngxaki iphazamisayo inkampani yethu ihlangabezane nayo, ngoku sijolise ngqo kwisicwangciso sethu se-United Next esiza kuguqula amava abathengi bethu kwaye sincede ukuzalisekisa amandla e-United."
Iziphumo zeKota yesiBini zezeMali
Ixeliwe ikota yesibini 2021 umthamo wehla nge-46% xa kuthelekiswa nekota yesibini 2019.
Ingxelo yekota yesibini ka-2021 yelahleko ye- $ 0.4 yezigidigidi, ilahleko ehlengahlengisiweyo ye-1.3 yezigidigidi.
Ixeliwe ikota yesibini ye-2021 iyonke ingeniso yokusebenza ye- $ 5.5 yezigidigidi, yehla ngama-52% xa kuthelekiswa nekota yesibini 2019.
Ixeliwe ikota yesibini i-2021 Iyonke ingeniso nge-Seat Seat Mile (TRASM) esezantsi ye-11.3% xa kuthelekiswa nekota yesibini ye-2019.
Ixelwe ikota yesibini ye-2021 yeendleko zokusebenza ezantsi nge-42%, yehla nge-32% ngaphandle kweentlawulo ezizodwa (iikhredithi), xa kuthelekiswa nekota yesibini ye-2019.
Ixeliwe ikota yesibini ka-2021 umda werhafu yangaphambi kwe-10.3%, eyi-29.2% elungelelanisiweyo.
Ixelwe ikota yesibini ka-2021 Amalungiselelo ahlengahlengisiweyo ngaphambi kweNzala, iirhafu, ukuhla kwexabiso kunye nokuhlawula amatyala (i-EBITDA) umda we-10.7%.
Inkxaso mali ekhuselweyo ekhuselweyo ibambisene nayo yonke inethiwekhi yomanyano lweendawo zokubeka, iindlela, kunye namasango - enziwe nge-4 yezigidigidi zeedola kumrhumo wabucala weebhondi, imali-mboleko yekota engama- $ 5 billion, kunye ne- $ 1.75 yezigidigidi ezijikelezayo. Le yeyokuqala kuhlobo lwayo lokuxhasa ngezimali kunye neyona ntengiso inkulu ingadibanisanga kwimbali yenqwelomoya.
Ixelwe ikota yesibini ka-2021 ephelisa ukufumaneka kwemali7 malunga ne- $ 23 yezigidigidi.
Ihotele yaseBlossom eHouston: Iingqikelelo eNtsha yokutyela ngababini...
Olu suku olutsha e-UNWTO linyathelo elikhulu lokuHamba...